Homeसमाचारमाझी बस्ती बि’वादको बारेमा श्वेता खड्काले मुख खोलिन् “ठगेको भए जुत्ताको माला लगाउनुस” (भिडियो सहित)
February 12, 2021 admin समाचार 5744
नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो’ पहलमा सिन्धुपाल्चोकको झ्याँडीमा निर्मा’ण भइरहेको एकिकृत वस्तीको बारेमा आएका समाचारहरु सत्य नभएको भन्दै त्यसको खण्ड’न गरेकी छिन् । आज सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामो स्टा’टस लेख्दै उनले माझी बस्तीका केही ब्यक्तिहरुसँग लिएको ।
अन्तर्वार्तालाई इडिट गरेर एकिकृत बस्ती नि’र्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने खालका नका’रात्मक सूचनाहरु सम्प्रेषित भइरहेको भन्दै ती समा’चारहरु सत्य नभएको बताएकी हुन्। उनले ती समाचारहरुको यथार्थ के हो भन्ने बारेमा सबै सामु स्प’ष्ट पार्न चाहन्छु भन्दै जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्ति’स्कबाट हट्ने छैन, भनेकी छिन् ।
मैले श्वेताश्री फाउण्डे’शनको नाममा पैसा उठाएर वि’लासी जीवन बिताएको प्रतिक्रियाहरु पनि देखेको छु । तर जसले मलाई फाउण्डेशनको नाममा पैसा उ’ठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको माला’सहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परि’क्रमा गर्न तयार छु । खड्काले भनेकी छिन् । – इताजा खबरबाट
December 7, 2020 admin समाचार 8914
टिकटकमा फलोअर्स् बढाउने चिन्ता छ? १० करोड फलोअर्स् भएकी यी किशोरीबाट सिक्नुहोस् (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 16, 2021 admin समाचार 5528
१६ बर्षकै उमेरमा १० करोड मानिसले बि’श्वास गर्नु? सुन्दा अकल्पनीय लाग्छ तर यो सत्य हो । एक १६ वर्षीया किशोरी भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा १० करोड फलो’अर्स पाउने पहि’लो व्यक्ति बनेकी छिन् । टिकटकमा १०
June 18, 2021 admin समाचार 4320
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारलाई बाढीले बेहा’ल तुल्याएको छ । मंगलबार इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारका करिब एकसय घर पूर्ण रुपमा डुबा’नमा परेका छन् । घरको तीन तलासम्म लेदोले डुबेको अवस्था छ भने सारा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242034)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229938)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229565)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227941)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226732)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226314)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194333)